Greenpeace inochema nezve mashoma iPad uye MacBook nzira dzekugadzirisa | IPhone nhau
Greenpeace inochema nezve mashoma iPad uye MacBook nzira dzekugadzirisa
Ivo vakomana veIFixit ndivo vanoona nezve kuongorora uye kubvarura zvese zvigadzirwa zvemagetsi zvinosvika kumusika gore rega rega kune diki diki, kuratidza vashandisi mikana yekugadzirisa yavanotipa kana tingave nedambudziko navo. Kwechinguva ikozvino, vagadziri vazhinji Ivo vanoshandisa glue seimwezve chishandiso mukugadzira maitiro, Kuti uyedze kudzikisa kusvika pakukwirisa zviyero zvakafanana, zvakamanikidzwa murondedzero nekudiwa kwevashandisi.
Vazhinji vedu vashandisi vanobvuma kuti ukobvu hwe iPhone hwakaringana uye kuti hazvidi kuti udzikise saizi yayo zvakanyanya, asi kuwedzera mabhenefiti aanogona kutipa, kungave mubhatiri kana zvimwe zvakatemwa. Greenpeace yakaburitsa mushumo umo inochema pamusoro pesarudzo shoma dzekugadzirisa idzo nyowani iyo iPad itsva 2017 uye MacBook mune zvese, apo zvizhinji zvezvinhu zvinotengeswa kubhodhi reamai, izvo zvinoita kuti kugadzirisa nekukurumidza uye kwakachipa kusakwanise.
Greenpeace yakashandisa iFixit dhata kugadzira uyu mushumo, chirevo umo iyo 13-inch MacBook Pro uye MacBook Retina inogamuchira poindi imwechete kubva gumi inogona. Mhando mbiri idzi havatenderi kutsiva bhatiri kana sikirini nenzira yakapfava uye iri pachena isingadhuri.
Iyo iPad 2017 inogamuchira poindi imwe chete kupfuura MacBook, ichisvika mamakisi maviri kubva gumi. Iyo chete Apple chigadzirwa chinoita zvakanaka zvese zviri zviviri iPhone 2 uye iyo iPhone 10 Plus, ine giredhi iri 7 kubva pa10 inogoneka. Kana tikatarisa mushumo, tinoona kuti iyo smartphone iyo inopa yakaipisisa mikana yekuigadzirisa ichiri iyo Galaxy S7 Edge. Ndichiri mumunda wemabhuku ekunyorera, iyo Mirosoft Surface Laptop.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » Greenpeace inochema nezve mashoma iPad uye MacBook nzira dzekugadzirisa
Rutsva runyorwa "My Chill Mix" inoonekwa kune vamwe vashandisi veApple Music